करिनाका छोरालाई देख्ने बित्तकै के हुन्छ रणवीर कपुरलाई ? पहिलो पटक खोले यस्तो रहस्य – Kavrepati
Home / मनोरंजन / करिनाका छोरालाई देख्ने बित्तकै के हुन्छ रणवीर कपुरलाई ? पहिलो पटक खोले यस्तो रहस्य
admin June 25, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 519 Views
अभिनेत्री करिना कपुर खान र सैफ अली खानका छोरा तैमुरका बलिउडमा थुप्रै फ्यानहरु रहेका छन् । उनको चार्म र क्युटनेस बाट कोही अछुतो रहन सकेको छैन । तैमुरको फोटो तथा भिडियो आउने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा भाईरल हुने गरेको छ ।
यहा सम्मकी तैमुरको फ्यान रणबीर कपुर समेत रहेका छन् । उनको क्युटनेश देखेर जो कोही मोहीत हुने गरेका छन् । एक अन्र्तबार्तामा रणबीरले जब तैमुरको फोटो सामाजिक सञ्जालमा आउँछ तब आफुले एकदमै चासोका साथ हेर्ने गरेको बताए । यहा सम्म कि उनी तैमरको भिडीयो स्टक समेत गर्ने गरेका छन् ।
रणीबीर लाई तैमुरको हेयरकट, उनको हिड्ने स्टाईल, तैमुरको हरेक चिज उनलाई मन पर्ने गर्छ । उनको फोटो हेरेर रणबीर आफ्नो बाल्यकालका दिनहरु याद गर्ने गरेको उनले आफैले बताएका छन् । उनको जमानामा न क्यामरा थियो न त यस्तो कल्चर नै । पब्लिकका पुग्न अलग तरिका थियो आज जस्तो सामाजिक सञ्जालहरु नभएको उनले बताए ।
Previous अब सधैका लागि छोडेर गए हाम्रा ३ करोड नेपालीको मनमा बसेका यी ब्याक्ति
Next भोलिदेखी सार्वजनिक यातायात खुल्ने,काहा काहा र कसरी चल्छ त?हेर्नुहोस्।